Tartanka LaLiga:- Kulanka Kooxaha Osasuna Iyo Real Madrid? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Real Madrid ayaa maanta safar ugu tegaysa kooxda Osasuna, waxaanay raadin doontaa guul u ogolaata in muddo saacado ah ay lix dhibcood ku qabato hoggaanka, iyadoo dhinaca kalena rajaynaysa in Barcelona ay guul-darraysato si hoggaanka lixda ah aanay waxba iskaga beddelin.
Los Blancos waxay hoggaanka horyaalka ku haysaa saddex dhibcood oo nadiif ah oo ay kak horreyso Barcelona, balse waxay booqasho ugu tegaysaa Osasuna oo aan ka waabanin kooxaha waaweyn, kuna jirta kaalinta 11aad oo ay ku hayso 28 dhibcood oo ay ka urursatay 22 ciyaarood.
Osasuna ayaa xili ciyaareedkan kusoo laabatay heerka koowaad markii ay kusoo guuleysatay koobka heerka labaad ee Sedunga Division, waxaanay ku naaloonaysaa waqti wanaagsan iyo boos u qalma marka la eego halka ay ka timid, 22 ciyaarood oo ay dheeshayna waxay soo guuleysatay lix ciyaarood, toban barbarro ah iyo lix laga badiyey, waana rikoodh u qalma koox kasoo dallacday heerka labaad.
Xili ciyaareedkii 2011-12 ayay Osasuna wacdaro ka dhigtay LaLiga iyadoo ku dhamaysatay kaalinta toddobaad, hase yeeshee waxay waqtigaas ahayd naadi ay kooxaha waaweyn kasii baqaan ciyaaraha ay garoonkeeda ugu tegayaan.
Dhinaca kale, Real Madrid oo aan wali kasoo kabanin niyad-jabkii guul-darradii 4-3 ahayd ee Real Sociedad ay garoonka Bernabeu ugu geysatay, kagana reebtay tartanka Copa del Rey oo marayay marxaladda semi-finalka, ayaa waxay maanta dagaal u geli doontaa inay hesho guushii 15aad ee xili ciyaareedkan kulamada horyaalka, waxase hore ay usoo barbarraysay toddoba jeer iyo hal mar oo kaliya oo laga badiyey.
Real Madrid ooh al mar oo kaliya ku guuleysatay horyaalka Spain ee LaLiga intii ka dambaysay 2012, waxay mudnaan gaar ah siinaysaa xili ciyaareedkan in ay Barcelona ka dhacsato LaLiga, iyadoo dhinaca kalena fiirinaysa sida ay suurtogalka ugu noqon karto inay mar kale hanato Champions League oo saddex sannadood oo xidhiidh ah kaddib ay Liverpool soo kala jartay guulaheedii xidhiidhka ahaa.
Marka la eego natiijooyinka labada kooxood ee min lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee horyaalka, Osasuna hal mar oo kaliya ayay soo guuleysatay, waxaana u raacay laba laga badiyey iyo laba barbarro ah, hase yeeshee Real Madrid ayaa far guulood iyo laba barbarro ah soo heshay.
Wararkii ugu dambeeyey ee labada kooxood?
Osasuna waxa dhaawac kaga maqan saddexda laacib ee muhiimka ah ee Chimy Avila, Ruben Martinez iyo Antonio Latorre, sidoo kalena waxa ganaax ku seegaya ciyaarta maanta Aridane Hernandez.
Marka laga yimaaddo afartan laacib, ma jiraan wax walaac ah oo haysta Osasuna oo ku saabsan ciyaaryahanno maqan, waxaanay dib u helayaan laacib ganaax ku seegay kulankii ugu dambeeyey.
Dhinaca Real Madrid, Marco Asensio iyo Eden Hazard ayaa ku maqnaanaya dhaawacii ay muddada dheer u jiifeen, hase yeeshee Casemiro, Lucas Vazquez iyo Dani Carvajal ayaa dhamaantood dib ugu soo labatay kooxda kaddib markii ay seegeen ciyaartii Sociedad.
Gareth Bale oo xilli hore iskaga baxay Santiago Bernabeu kulankii Sociedad oo uu dusha sare ka daawanayey, ayaa lagu soo daray liiska ciyaartoyga Real Madrid, waxa se aan kusoo bixin Rodrygo.